Mockup maimaim-poana 15 ho an'ny karatra fandraharahana miaraka amina endrika minimalista | Famoronana an-tserasera
Melissa Perrotta | | Graphic Design, Photoshop, Templates
Ny famolavolana sary dia ampahan'ny asa izay manampy amin'ny fanaovana ny tsara indrindra ho an'ny zava-drehetra. Noho io antony io dia katsaho asehoy ny sary amin'ny fomba mamorona indrindra azo atao ny manintona ny mpandinika ary mampifandray azy ireo amin'ny endrika.
Ho an'ity, ny fanesoana efa niova endrika. Ireo dia sary azo ovaina namboarina tamina programa fanovana, izay ahafahanao manova ny atiny sy manaingo azy araka izay tianao. Amin'io lafiny io, ny famolavolana dia miditra an-tsehatra ao amin'ny rafitry ny sarin'ny orinasa.
ny Iray amin'ireo singa fototra ireo ny karatra fandraharahana ho an'ny orinasa. Na dia ankehitriny aza dia nihena ny fampiasana azy noho ny fampiasana tambajotra sosialy; Ireo dia mbola iray amin'ireo vokatra be fangatahana indrindra avy amin'ny mpamorona.
Ity misy fanangonana 1Fanesoana karatra orinasa minimalista 5 kalitao avo. Izy ireo dia rakitra amin'ny endrika PSD ary hamela fanovana haingana ny atiny.
1 Fanesoana karatra loko marobe
2 Karatra mitsangana miaraka ambadika mavokely
3 Karatra minimalista miaraka amina loko roa sosona
4 Fametahana karatra mijanona eo an-tsisiny
5 Fanesoana karatra orinasa
6 Fanesoana karatra orinasa amin'ny zavatra haingon-trano
7 Fanesoana ny karatra orinasa
8 Fanesoana karatra miaraka amin'ny sampana hazo
9 Karatra fandraharahana any amin'ny faritra beige
10 Karatra manokana miaraka amin'ny crème background
11 Valopy kely milomaly minimalista sy mockup ho an'ny orinasa
12 Fanesoana karatra misy sisintany azo ovaina
13 Fanesoana karatra valopy miisa 3 indroa
14 Fanesoana fotsy ho an'ny karatra fandraharahana
Fanesoana karatra loko marobe
Eto izahay dia manana rakitra ao amin'ny PSD mamela hamorona fampisehoana karatra loko marobe. Mila manitsy ny loko sivana fotsiny ianao ary manova ireo singa ary efa anananao ny karatry ny loko.
Karatra mitsangana miaraka ambadika mavokely
Fanesoana karatra manokana ao endrika mioritra tena tsotra nefa miaraka ambadika miloko.
Karatra minimalista miaraka amina loko roa sosona
Ity fanesoana ity dia manasongadina a stack ny karatra fandraharahana 3 eo ambadika miloko roa sosona. Ahafahanao manitsy ny sosona rehetra ary manova ny loko afara.
Fametahana karatra mijanona eo an-tsisiny
Fanesoesoana tena mahafinaritra miaraka amin'ny fomba mifanaraka amin'ny fironana farany. Milalao miaraka aminy fifandanjan'ny karatra eo afovoan'ny loko mifanohitra.
Fanesoana karatra orinasa
3000 x 2250 px efa famahana ny 300dpi. Izy io koa dia manana safidy hampiasaina amin'ny farany ambany na amin'ny fitaovana hafa.
Fanesoana karatra orinasa amin'ny zavatra haingon-trano
Mety tsara ity fampisehoana ity tetikasa mifandraika amin'ny endrika anatiny, fanaka na zavakanto. Ahafahanao mampiasa ny karatra amin'ny loko miloko roa, tsotra na amin'ny zavatra misy ny sary.
Fanesoana ny karatra orinasa
Namboarin'i Athos Pampa ity fanesoana ity dia ahafahanao milalao foil volamena amin'ny loko isan-karazany. Mampiasà fiaviana na loko tianao.
Fanesoana karatra miaraka amin'ny sampana hazo
Amin'ny fisie PSD dia azonao atao ny misintona ny preset mockup ho fanampin'ny typeface nampiasaina. Ho hitanao fa natao anaty sosona tanteraka izy io mba hahafahanao manova ny singa mora foana.
Karatra fandraharahana any amin'ny faritra beige
Freebie an'ny Krisjanis Mezulis izay avy be entana Fomban'ny Chanel.
Karatra manokana miaraka amin'ny crème background
Este fanesoana endrika endrika marindrano minimalista Mamela anao hanolotra karazana karatra fandraharahana.
Valopy kely milomaly minimalista sy mockup ho an'ny orinasa
Amin'ity fanesoana ity dia mety ho hitanao entana samy hafa soratra fototra hanolotra ny volavolanao. Manana loko pastel sy famolavolana kely izy ireo.
Fanesoana karatra misy sisintany azo ovaina
Ity freebie ity Nisarika i Sam Niala tao Behance dia mety ho an'ny fampisehoana ireo antontan-karatra. Miaraka aminy ianao dia afaka manova ny lokon'ny sisin'ny karatra ary mampihatra sivana miloko.
Fanesoana karatra valopy miisa 3 indroa
Amin'ity fanesoana miloko ity dia azonao atao ny manolotra Safidy karatra fandraharahana 3 amin'ny fotoana iray. Ny haben'ny rakitra dia 3000 × 2000 teboka.
Fanesoana fotsy ho an'ny karatra fandraharahana
Fanesoana ity mety amin'ny karazana fampisehoana. Miaraka aminy dia afaka misafidy ny hampiasa background fotsy tsotra na lafika miloko ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Fanesoana maimaim-poana 15 ho an'ny karatra fandraharahana miaraka amina endrika minimalist
Hetsika Photoshop 15 hanovana ny sarinao